ရေးသားသူ poemflower at Wednesday, September 02, 2009
ဂေါက်သီးနဲ့ရှောက်သီး September 2, 2009 at 5:34 PM
yangonthar September 2, 2009 at 6:21 PM
ခါးဝတ်ကဲ့သို့ မြဲသင့်သော သီလ၊ ဖြူဖြူမည်းမည်း နူနူဝဲဝဲစောင့်
ထိန်းမရမည့်သီလ၊ လူဟု မှန်သောသူတိုင်း စောင့်ထိန်းရ မည့်
သီလ၊ဖြစ်သော ငါးပါးသော သီလ တို့ ကို စောင့်ထိန်းကြလျှက်
မြန်မာ အမျိုးကောင်းသား အမျိုးကောင်းသမီး တို့ သည် သုံးပါး
သော ကာလတို့ တွင် ရောက်လေရာ အရပ်တိုင်း၌ ချမ်းသာ ခြင်းဖြင့်သာ ပြည့်စုံကြပါစေကုန်သော် .... သာဓု သာဓု သာဓု
Anonymous September 3, 2009 at 4:23 AM
ဖတ်သွားပါပြီ ငါးပါးသီလပဲ စောင့်တော့မည်။
အိမ် September 3, 2009 at 5:28 AM
မသိဘူးဗျ. အရင်က ..ဟီး... ခုမှသိတာ... မှတ်သားစရာပါပဲဗျာ..။
aung oo September 3, 2009 at 7:54 AM
အခုလို ရေးသားတင်ပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်မတို့။
သီလတွေ စောင့်ထိန်းပြီး သီလ သမာဓိ ပညာဆိုတဲ့ ဒေသနာ အစဉ်အတိုင်း ကျင့်ကြံနိုင်၍ ကောင်းကျိုးချမ်းသာများ ရရှိခံစားနိုင်ပါစေ။
ထင်လင်းအောင် September 3, 2009 at 10:19 AM
Yan Yan September 3, 2009 at 5:51 PM
ဒါကြောင့် ထင်တယ် ရန်ကုန်မှာလည် ရွာလိုက်တဲ့မိုးး
Anonymous September 4, 2009 at 3:52 AM
ဒါပေမဲ့ တင်းခြင်သူနဲ့ စပါးချိန်သူ တူတူပဲထင်တယ်နော်။ ဟီး
မောင်ကောင်း September 4, 2009 at 1:09 PM
ဂရုဓမ္မအခါတော်နေ့ပိုစ့်လေးအတွက်.. လာရောက် သာဓုခေါ်သွားပါတယ်.. နေ့ကောင်းနေ့မြတ်မှာ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေအစ်မ...
kokomaung.uk September 5, 2009 at 7:50 PM
လစဉ်ရဲ့ရာသီအချိန်အခါလေးရောက်တိုင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဆို နေ့ရက်ရက်ကြီးတွေအကြောင်းသိချင်ရင် ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်ကိုဘဲ လာခဲ့တော့မယ်။ အများပြည်သူတို့ကိုလဲ ဧရာဝတီကိုသွားကြပါလို့ ကြော်ငြာဝင်လိုက်ဦးမယ်။
yegyi September 10, 2009 at 5:37 PM
နောက်ကျပေမယ့် ဗဟုသုတတိုးစေတဲ့ Post လေး ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ
Anonymous September 11, 2009 at 1:23 AM
By the way , how can be the Prostitute has maintained the5par thi la ???